Taariikhda Shirkadda - Anshun AKF Teknolojiyada Caafimaadka Co., Ltd.
Diisambar 2019 ~ Janaayo 2020
Marka dadka dalka oo dhami ay si farxad leh ugu diyaar garoobaan isku-xidhka sannadka cusub, dagaal si aamusnaan ah ayaa adduunka ugu yimaada, isagoo ku sii qulqulaya dhulka shiinaha oo dhan. Hal mar, dad badan ayaa qabay cudurka, dalkoo dhana wuxuu ku jiray xaalad cabsi ah. waxaan bilownay inaan ka hortagno cudurka faafa, dadka oo dhanna waa la xiray.
Horraantii Janaayo 2020
Hoggaamiyeyaasha shirkaddu waxay ka walaacsan yihiin horumarka xaaladda cudurka faafa. Shirkaddu waxay ka walaacday dalka hooyo iyo dadka. Xaaladda faafa ee faafa, waxaa jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo xidhan goono cad gobolkasta oo dib ugu noqonaya, VoW si loogu guuleysto dagaalka faafa.
Bartamihii bishii Janaayo 202
Cudurka faafa ayaa qarxay. Si kastaba ha noqotee ， dhammaan waddankan waxay si wadajir ah ula dagaallamayaan qalbigeenna iyo nafteenna. Haddii ay jiraan wax dhib ah oo ka yimaada hal dhinac, waxaa taageeri doona dhinacyada oo dhan. Khubarada caafimaadka ayaa ku wargaliyay in indho-shareerka ay si wax ku ool ah uga hortagi karto faafidaidemHoggaamiyeyaasha shirkaddu sidoo kale waxay rabaan inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah faafa iyo inay gacan weyn ka geystaan ​​dagaalka.
Dhamaadka Janaayo 2020
Maamulaha shirkadda ayaa go’aansaday inuu beddelo qorshaha ganacsi ee shirkadda sanadka soo socda. Wuxuu u isticmaalay lacagtii markii hore loo isticmaalay in lagu balaadhiyo warshadda iyo warshadda si deg deg ah u lunsasho waxaan dooneynaa inaan gacan ka geysano la dagaallanka cudurka faafa. Kadib shirkadii oo dhami waxay bilawday inay udiyaar garowdo la dagaalanka cudurka faafa.
Horraantii Febraayo 2020
Waxaan diyaarinay dhamaan warshaddan soosaaraya iyo soosaarida qalabka, Mashiinka sameynta maaskaro si guul leh ayaa loo xajiyay, Dhamaan shaqaalaheena shirkada waxay diyaar u yihiin inay soo saaraan maaskaro la dagaalanka cudurka faafa.
11th Febraayo 2020
Anshun Caafimaadka Iyo Teknolojiyada Caafimaadka Co., Ltd. si rasmi ah ayaa loo aasaasayb Shirkaddu waxay heshay agab caafimaad license liisanka wax soo saarka license shatiga caafimaadka, etC.
Bartamaha bisha Febraayo 2020
Dufcadii ugu horeysay ee mashiinada wax soo saarka maaskaro ayaa soo gaadhay warshadda ， waxaanan bilaabaynaa inaan soo saarno wejiga la iska tuuri karo ee loo isticmaalo la dagaallanka cudurrada faafa.
23ka Maarso 2020
Maaskarada la iska tuuri karo ee la tuuri karo iyo maaskarada loo yaqaan 'Kn95 mask' ee uu soo saaray AKF ayaa loo qimeeyay iyadoo loo eegayo heerka imtixaanka ee GB2626- 2006.
28th Maarso 2020
Maaskarada la tuuri karo ee ay soo saartay AKF ayaa heshay shahaadada heerka CE. Maaskaro Kn95 oo ay soo saartay AKF ayaa helay shahaadada heerka CE.
Xilliga hoggaanka caqliga leh ee hoggaamiyaha, shirkaddu waxay kordhisay khadadka wax soo saarka oo si joogto ah loo dhoofiyo waji-ka-ilaalinta si loola dagaallamo cudurrada faafa. Maaskaradayada ayaa door muhiim ah ka ciyaaray Shiinaha oo dhan.
Dhamaadka Maarso 2020
Awoodeena wax soo saar ayaa laga kordhiyay tobankii kun ee ugu horeeyay 1 maalin ilaa 300-500 kun oo maalin ah, ilaa hadana awooda wax soo saarku wali wey sii kordheysaa cisbitaalada ， aagag aad u faafa iyo wixii la mid ah.
Shirkaddayadu waxay bilowday inay aqbasho macaamiisha dhoofinta, iyo sidoo kale qaar ka mid ah deeqaha gudaha domestic Waqti yar gudahood, badeecooyinka maaskarada AKF waxaa laga helay dalal iyo gobollo badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Yurub, Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Australia ， Ruushka, Hong Kong , iwm Waxay door laxaad leh ka ciyaartay intii uu socday faafitaanka faafa.
Waqtigan xaadirka ah, xaaladda Shiinaha waa mid aad u deggan ， laakiin khadka wax soo saarkeena lama joojin karo, ka hortegista cudurrada faafi maayo. Waxaan dooneynaa inaan ka caawinno wiilasha iyo gabdhaha walaalaha ah ee adduunka oo idil inay si wadajir ah ula dagaallamaan cudurka. Mustaqbalka ayaa ka fiicnaan doona.